Izithuba ZemiSebenzi Emisebenzi Emirates Ama-Adv With Dubai City Company e-UAE 🥇
Emirates Jobs e Dubai
Izikhala zaseMpumalanga Ephakathi nokuthi ungayithola kanjani?
Emirates Jobs for expatriates, we all know them and we all want them. The only thing some of the career seekers don’t know is how to find them. Dubai Companies kukhona ukuthatha ngokuzithandela ochwepheshe emikhakheni. Isibonelo, abafuna umsebenzi wePhilippines abasebenza e-UAE. ngakolunye uhlangothi, abasebenzi baseNdiya badlula ngempumelelo izingxoxo ze-Emirates Jobs. INingizimu Afrika iyachichima futhi iyathanda ukusebenza e-UAE. Umsebenzi we-Emirates isivumelwano esihle kakhulu sabaphethe imisebenzi.
Ngaphansi kwalesi simo, uma ungumzingeli wemisebenzi yomhlaba wonke. Qhubeka nabanye futhi ufune umsebenzi e-UAE. Vele, eminye imisebenzi enikezwayo kanye nokufakwa kwemisebenzi kungaba nzima. Kepha kuyasizakala ukwenza isicelo somsebenzi ngempumelelo. Umuntu onephupho nombono. Unamandla kunomuntu onamaqiniso nebhajethi enkulu. Ngisho nase-United Arab Emirates.
Ingabe kufanelekile ukuthatha imisebenzi yesikhathi esithile e-Dubai?
Uhlobo oluthakazelisa kakhulu lwemisebenzi luyimisebenzi yesikhashana eDubai. okwesikhashana umsebenzi kungaba ngumthombo oyinhloko wemali engenayo noma owengeziwe emholweni wakho. Ngaphezu kwalokho ukuthola amahora amaningi emisebenzini yosuku kungaba nzima impela. Kepha ngokwesibonelo, ungakwenza thola umsebenzi njengomgcini wesitolo noma umsizi wokuthengisa. Futhi uzokwazi ukwenza imali eningi. Imisebenzi ye-Emirates kulula kakhulu ukuyithola uma uyiphatha kahle futhi wenza ucwaningo lwasekhaya oluqinile.
Ingeniso yesikhathi esithile ingasetshenziswa ezintweni eziningi. Isibonelo, ungagcina imali ethile kanye nokuchitha esikhathini esizayo ukuqasha e-UAE. Indlela elula yokuthola leyo ndlela engenayo ukufaka ngokuqondile. Ngakho, kulokhu, thola kabusha futhi uhambe nge-curriculum vitae yakho. Ngokuvamile ukukhuluma indawo yokudlela yaseDubai kanye nezindawo zokudlela. Ngaso sonke isikhathi ngifuna abasebenzi. Kulokhu, uzodinga ukuphoqa ingqondo yakho futhi phuma uyokhipha i-CV.
Ngokuqinisekile imisebenzi yesikhathi esithile yinto enhle ukukusiza ngokulungisa isabelomali sakho. Sincoma kakhulu ukuthi uthole imali engenayo. Ngokuqinisekile e-Dubai noma e-Abu Dhabi, uyayidinga ukwenza kwakho Arabic dream yokuphila. Ngakolunye uhlangothi, izindawo ezingcono kakhulu zemisebenzi esheshayo yizinkampani zokusesha imisebenzi. Ngakho, ngalokhu engqondweni, bheka Inkampani ebhodi yezemisebenzi e Dubai futhi website ye-recruitment agent. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Ukufuna imisebenzi yehhotela e-Dubai?
Ukubeka ngenye indlela umsebenzi wokungenisa izihambi emisebenzi ye-Emirates. Lolu hlobo lwemisebenzi luyinhloko umthombo owenzelwe amazwe angaphandle amazwe okuhlangenwe nakho. Imisebenzi yehhotela inamaphuzu amahle ambalwa. Amahhotela aneminyango engaphezu kwe-10. Ngokuhamba kwesikhathi, ungaqala njengombumbi wasekhishini bese kuthi eminyakeni embalwa ukhushulwe kumpheki wasekhishini. ngakolunye uhlangothi, ungaqala njengokwamukela futhi ukhule ngamakhono akho kuze kubaphathi jikelele.
Ikakhulu e-Dubai, amathathu anamaHhotela amaningi lapho ungathola khona Okuhle kakhulu Esigabeni Emirates Imisebenzi E-UAE ungathola umsebenzi. Futhi kukhunjulwe lokho hhayi idolobha elilodwa elikhona e-7 Emirates ngemisebenzi. I-Abu Dhabi inkampani enhle impela yabasebenzi. Bambalwa abafuna umsebenzi abafuna imisebenzi yehhotela e-Abu Dhabi. Ngasohlangothini oluhle, kufanele uhlakaniphe ekuzingeleni umsebenzi wamaphupho. Futhi ukhethe amanye ama-Emirates we-7, ngokwesibonelo, kukhona okunikezwayo kwemisebenzi emadolobheni aphansi e-Abu Dhabi. Konke okudingeka ukwenze ukuthenga imoto encane bese ushayela ehhotela.
Ngakolunye uhlangothi, ukusebenza e-Emirates futhi kugqugquzelwa ukusebenzela i-7star Hotels kuyamangaza. Futhi edolobheni lamaphupho, konke kungenzeka. Ungalokothi uyeke futhi uthumele isicelo somsebenzi. Noma ngabe njengamanje usebenzele enye iDubai Company.
Iseluleko Somsebenzi Wezokuphepha e-Dubai
Omunye umsebenzi we-posh omangazayo ukukhetha ku-UAE. Izinkanyezi ezingenakubalwa nezinkanyezi zama-movie eza e-CITY. Isibonelo, ukuhamba ngeTome kusuka ku-mission akunakwenzeka vakashela i-United Arab Emirates. Ngaphansi kwalawa amaphrojekthi, ungaqala njengabaphathi bezokugada. Izinga elilandelayo kulo ukuphepha okuyimfihlo kosomabhizinisi be-VIP. Noma uxhumeke kwizinhlaka zabasebenzi imisebenzi elula ehlinzekwayo. Esikhathini esiphezulu Ukuthenga Amakamelo okufuna izibambiso ku-UAE. Amaphakheji asendaweni afuna izibhamu. Imisebenzi yokusebenza kwekhamera ye-CCTV inhle ukubhekana nabasebenzi abaqashile ukuzingela abaqeqeshiwe.
Ngokuvamile onogada abakhuluma e-UAE. Kudingeka ukwazi ukusebenza ngokunemba kwebhizinisi okuqinile. Umsebenzi omningi nokulawula emsebenzini osendaweni esheshayo. Umsebenzi wokuphepha kufaka phakathi ukuqinisa isikhathi. Umuntu ngamunye kufanele abe namakhono okuphathwa kwamaphrojekthi aqinile Empilweni eseMpumalanga iyinzuzo kulokhu. Ikhono lokudidiyela liyasiza yezikhundla zobukhulu. Kufanele kukhunjulwe ukuthi uMqondisi Wezokuphepha. Ingakuthumela ukuthi wenze imisebenzi ebeka engcupheni kakhulu. Isikhulu sezokuphepha singazizwa sisebenza ezindaweni ezinobungozi kakhulu.
Ekuhlaziyeni kokugcina, ungathunyelwa ukuthi uhlole igumbi lokulawula ukuphepha ye-VIP. Kulayishwa i-bay nokujikeleza nokubona. Futhi kubuyela Endlini nge-VIP yokupaka izimoto. Ngasohlangothini oluhle, Inkambu Yezokuphepha inemiholo eqinile eDubai. Ikakhulu endaweni esebenza ingozi enkulu.
Indlela yokuthola ezokuthutha kanye Imisebenzi yokushayela e Dubai?
Kunamathuba amaningi emisebenzi emakethe yomsebenzi wase-Emirates. Sengisho nje ukufuna imisebenzi e-Dubai embonini yokushayela. Kulula ukuqala ukusebenza njengomshayeli wangasese. Isibonelo uber usebenza kuwo ngamagama anjalo. Ngakolunye uhlangothi imisebenzi yomshayeli wetekisi nayo iyatholakala. Kodwa lokho kuyoba yisikhathi eside ukuthi uzodinga ukuqinisekiswa.
Imisebenzi yokuhamba eDubai ayithandwa kangako e-Emirates. Ngoba eDubai ungathola imisebenzi ekhokhelwa kahle ngenhlangano enkulu. Kufanele ukhumbule ukuthi akusabikhona okuhlinzeka ngokuthunyelwe komsebenzi mayelana nezikhala zomsebenzi. Ukushayela i-Limousines kungenye yethuba elihle lokwenza imiholo ehle. Ungakwazi futhi thola umsebenzi zamalambu okushayela iveni. Ngokusekelwe kulolo shayela kuyinjabulo uma ubamba amalayisense okushayela.
Njengoba kuyindaba yamaqiniso Philippines Futhi Indian isipiliyoni expatriates. Ngiyakwazi faka isicelo sesikhundla somshayeli wenkampani e-Uber. Lolu hlobo lokunikeza luyindlela elula kunazo zonke yokuthola umsebenzi e-UAE. Izikhundla zokugcina inkampani yethu ezikweluleka ngazo ukuthi uzithole. Ukuba nesibindi sokushayela kwangasese.
Ungathola kanjani umsebenzi we-HR e-Dubai City?
Elinye iphuzu elibalulekile lomsebenzi wakho kungaba ibhizinisi lokuqasha. Amakhono okuphatha i-HR ku IMiddle East yamukelwa ngokumangazayo. Imisebenzi ye-Emirates efana nemenenja ye-HR ifaka amahora amade nokwenza umsebenzi. Ukungasho ukuthi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi njengesikhulu esiphezulu. Izinkampani zaseDubai City ezinjengamahhotela namabhizinisi wezezimali ukusiza abaphothule iziqu ezintsha nge-MBA ukukhuthazwa ngaphakathi kwabe-HR juniors isikhundla.
Ibhizinisi lokuqasha e-Emirates kuyinto enkulu. Kodwa-ke ukufika emnyangweni wakwa-HR ngaphakathi enkampanini udinga ukuthuthukisa amasu aqinile esenzo. Ngebhizinisi ngalinye lokuqasha umqashi, uzothola. To ukuthola umsebenzi wokuqasha ngaphezulu komhlahlandlela inkampani ngokwesibonelo. Udinga ukuthi ube neminyaka engu-3 engaphansi kokuhlangenwe nakho. Ukuphathwa kwabakwa-HR kudala uhlelo lokufinyelela abasebenzi abasebenzayo. Kudingeka futhi uhlangabezane nomnqamulajuqu oceliwe ngesikhathi sokuziphatha. Ohlangothini olubi, udinga izinga.
Futhi, kudingeka sikwazise ukuthi imisebenzi yakwa-HR itholakala eDubai nase-Abu Dhabi. Ngakho izindleko zokuphila zenyuka qhathanisa nezinkampani zomama. Kepha ngasohlangothini oluhle, imiholo yakho iba phezulu e-Emirates. Njengomphathi we-HR ungathola ngaphezulu kwe- $ 3k ngenyanga kuze kube ku- $ 5k uma uyiqhawe elisebenzayo.
Ungasesha kanjani umsebenzi e-Dubai nge-visa?
Ukubeka ngenye indlela, wonke umuntu ofuna umsebenzi ancintisana nabanye abafuna umsebenzi e-UAE. Ngalesi sizathu, izinkulungwane zabazingeli bezomsebenzi zithumela i-CV ezinkampanini zaseDubai. Ngasohlangothini oluhle, isimo esifanayo sokhetho ngalunye. Ngakho-ke une-visa futhi yini okufanele uyenze? Indlela enhle umane hit abaphathi yokuqashwa e-UAE. Uma une-visa imakethe yokuqashwa ivulekele kuwe. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele uthinte abaqashi nabaqashi ngezimakethe zendawo.
Imisebenzi ye-Visa inikezwa wonke umuntu ofuna umsebenzi. Icala elibi kakhulu leli lapho i-visa yakho izophelelwa yisikhathi kungekudala. Ungafisi ukuthola umsebenzi. Noma kunjalo, udinga ukuze ube smart ekufuneni umsebenzi. Yenze lokho kwenzeke futhi uthole lokho umsebenzi wephupho ngokushesha. Uvele ube ne-visa futhi uma uhlala e-Dubai isikhathi siphume. Ungalahleki isikhathi futhi uqhubeke nokuthumela Ukuqala.
I-Dubai ne-Visa iyi-dreamland yawo wonke umuntu. Ungathola umsebenzi ngokushesha futhi awunayo inkinga ngabashayeli besikhathi esizayo. Ungakwazi qalisa umsebenzi ngokushesha kanye nomqondisi wethu wokufuna umsebenzi. No question asked by your future employer will be made except. Banking account and filling out application career. That is all that you need if you have a working visa in Dubai.
Imisebenzi Yokungena Emisebenzini ye-Dubayi Nezokuthutha e-UAE
Umsebenzi wokusebenza kwebhizinisi nezinto zokuhamba. Ngale nhloso, udinga ukukwenza ucwaningo olunzulu ezinkampanini eziqashayo njengamanje. Amakhono amahle kakhulu wokuxhumana ayadingeka kubaphathi bezokuhamba. Okokuqala, ulwazi oluhle ngohlelo lokuphathwa kokugcina impahla nakanjani kungakusiza ukuba uthole umsebenzi omusha e-Dubai. Yiqiniso, abathintekayo abanolwazi bayonikezwa okuthandayo ngokuhamba kwesikhathi.
Indima yezinkampani zokuthutha njengoba isiphathimandla sezinkampani ziqondisa ngokuyinhloko amaqembu esayithi kanye nezinto ezithinta izinto. Ngokucophelela ukuqoqa izinto ezibonakalayo kusuka ku-co-operated izinkampani e Dubai City futhi ubeka umyalelo kubaphakeli emhlabeni jikelele.
Ngophawu olufanayo I-Gulf kanye nokuhambisa ibhizinisi nokuhlela ukulethwa kanye nokuqoqwa eminyangweni yenkampani. Ngasikhathi sinye, isikhundla sakho sifaka ukubheka nokuxhumanisa imisebenzi yomshayeli. Empeleni, ukuhlela umthombo omusha wama-oda nokuqoqwa kwamasampula okusebenza kwabanye kuwumsebenzi oyinhloko.
Nakuba lokhu kungase kube yilo logistics yangempela izinkampani ezise Dubai nase-Abu Dhabi. Ukuqashwa kwabaqashi kuphela ngeminyaka engu-2-3 yocwaningo olufanele ukuze uqiniseke ukuthi unemininingwane emihle nawe. Kumelwe kukhunjulwe ukuthi ulwazi lwemikhiqizo yezinkampani e-Emirates. Futhi ilayisensi yokushayela e-United Arab Emirates ewufanelekile ukuba ngumuntu osanda kuqashwa e-Dubai.
Ungayithola kanjani imisebenzi ye-Engineering e-Dubai?
Ngokuhamba kwesikhathi, ngifuna amathuba emisebenzi yobunjiniyela eDubai. Kwenza abafuna umsebenzi abe heck impela. Ngezikhathi ezithile ungathola isikhundla sonjiniyela phezu kwabezindaba zenhlalo. Kuze kube manje, izinkampani eziseDubai zobunjiniyela ezihamba phambili zibandakanya izikhundla eziningana. Njengoba kuphawuliwe EMpumalanga Ephakathi ungathola izikhala ngenxa yezikhundla ezingekho ngaphansi kukahulumeni kanye nohulumeni. Kanye nezithuba zemishini, ngaphezu kwalokho imisebenzi yezinjini zogesi nabakwa-biotech.
Uma ufuna amaholo aphezulu kumaphrojekthi wobunjiniyela. Khulisa kabusha amandla akho ukuze uthole imisebenzi efiselekayo. Onjiniyela abaneminyaka engu-10 yesipiliyoni kuveza umsebenzi wakho e-UAE. Zama ukushintshwa kabusha komhlaba, izinhlelo zobunjiniyela bezokuhamba ngobuningi, ngakolunye uhlangothi, izinkundla zezindiza nazo zikalwa kakhulu ngomsebenzi waleso simboni.
Ngesikhathi esifanayo, ubuningi bezobunjiniyela amathuba emisebenzi ngisho nezidingo. Kancane kancane zitholakala eDubai Industrial City naseDubiotech. Ukufika ekugcineni ukuthi ungafinyelela izinkampani zedolobha laseDubai Industrial Dubai nezinkampani ze-Abu Dhabi ngokusebenzisa izinsiza eziku-inthanethi ezifana neGoogle noma iLinkedIn. Ukuphela kwendlela yokuthola umsebenzi wobunjiniyela eDubai. Lokho ukusho, ukuthi faka isicelo sokusebenza kwamawebhusayithi eDubai futhi ufinyelele kuma-ejensi wokuqashwa ngosizo lwabasebenzi.
Ngakolunye uhlangothi, uma unolwazi ku-Aerospace engineering uphakamise isandla sakho uphinde uhlole Emirates Mars Mission.
Why should expats apply for Imisebenzi kahulumeni waseDubai?
Into yokuqala yokukhumbula umsebenzi kahulumeni indlela engcono kakhulu ye-Dubai Jobs. Ukuveza ukuthi ungumzingeli we-expatriate career. Ngokuvamile ukukhuluma ngifuna ushintsho lomsebenzi kwenza noma ngubani athukuthele. Ngakolunye uhlangothi, ungapheli amandla. Lihlole izinga eliphezulu lomsebenzi kuphela abazimele abashesha ukuwuthola. Umsebenzi kahulumeni uthatha isikhathi. Abanye izicelo zokuqashwa ezithatha izinyanga ezingama-6-8.
Kukhona ithuba e-Emirates ngamathuba emisebenzi kahulumeni. Ngaphansi kwalezo zimo, singakusiza ngezinkampani zikaHulumeni nangokufuna kwakho umsebenzi. Ngokwalesi sizathu, Dubai City Inkampani uyazi ukuthi ungafika kanjani. Ngalolo msebenzi owenziwa nguhulumeni wephupho e-Dubai.
Amaphesenti angaphezu kwangu-80 abahlali eDubai. Ngithanda ukuqala ukusebenzela izinkampani zikahulumeni. Njengoba sinikezwe la maphuzu, senze inhlolo-vo ku-UAE. Futhi sathola ukuthi unolwazi lobuchwepheshe. Izokusiza ukuphathwa komhlaba amathuba ezinkampanini ezisebenza uhulumeni. Iphrojekthi yethu yocwaningo iveze ukuthi expats bafuna career ephrojekthi ezinkampanini zikahulumeni. Njengendlela ye-No.1 yokuthuthukisa umsebenzi wawo wokuphila.
Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, ngenhlangano enkulu unamathuba amakhulu okubekwa. Futhi iningi abazingeli bomsebenzi wasekhaya. Ukusho ukuthi sebeyibekile imigomo yabo yempumelelo. Mane nje uqale ukuqashwa kukahulumeni. Enye yezindawo ezinhle kakhulu zomsebenzi yiBayt ongayenza thola amathuba emisebenzi eMiddle East.
Ucwaningo lwakamuva lwe-Emirates Jobs. Ngokufingqa, kukhombisile ukuthi i-45 iphesenti yabaqashi e-UAE. Ngokuvamile, bahlela ukuthuthukisa ibhizinisi nokukhulisa ukubekwa okuphezulu ngonyaka isikhathi nakwamanye amazwe we-GCC.
Emirates Jobs and Finance Amathuba emisebenzi e-Dubai
Abantu abaningi abasuka kwamanye amazwe bafuna imisebenzi ye-Emirates. Emsebenzini wokuhamba kwesikhathi emkhakheni wezimali ozimele ngaphakathi I-UAE isinqumo esihle. Iphoyinti elivame ukunakwa umsebenzi yizinhlangano ezinkulu zezimali. Empeleni, kunezinkampani ezincane ezinezikhala eziningi zomsebenzi. Akuwona wonke umuntu onamaphupho ukusebenza emkhakheni wezezimali zikahulumeni. Ngakho uhluke kwabanye futhi ufune izinkampani ezincane zezezimali. Ngokwesibonelo, izinkampani zokushintshanisa ze-FX nezitolo ze-pawn. Zindawo ezinhle kakhulu zokuqala umsebenzi omusha.
Ngakolunye uhlangothi, uma unesipiliyoni sezandiso emakethe yezezimali. Kunemisebenzi eminingana yezezimali amathuba atholakalayo okwezindleko ku-UAE. Kufanele ubuke ezinye zezinto eziyisisekelo. Eqinisweni umsebenzi wezezimali uphinde uthole izinketho ezitholakalayo zezindleko emazweni aseGCC. Ngakho akuyona kuphela i-Dubai ne-Abu Dhabi kuphela.
Ekuhlaziyeni kokugcina imisebenzi ezezimali ikufanele ukuqashwa. Vele ngoba imizamo yakho egxile ekutholeni umsebenzi ofanele. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, ungahambela ezikhundleni zokuphatha. Emabhange ezezimali aseMiddle East futhi ahlinzeke izinkampani ezikhokhela umuntu olungile.
Ungaqala kanjani umdwebo design umsebenzi e Dubai
Njengoba kuphawuliwe udinga amasethi athile amakhono walolu hlobo uma imisebenzi ye-Emirates. To start the fresh graphic designer umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. For the most part, you will need to have the ability ukugcina isimo senqondo sisezingeni eliphakeme kakhulu. Ngaphezulu kwaso, udinga ukwakha amasiko ezinkampani ngeziqondisi zomkhiqizo wenkampani. Ngokushesha noma njengomqambi wezithombe, uzodinga ukuphatha amaphrojekthi wekhwalithi ephezulu.
Kuze kube sikhathi samanje, uzodinga ukudala imiqondo ebonakalayo yabaphathi. Futhi kunjalo abanikazi bamabhizinisi aphesheya nezinkampani zabo. Iningi lezinkampani ezizinze e-Abu Dhabi nase Dubai. Uma nje uneminye imibono yephrojekthi okufanele uyixhume. Ngokuvamile ukukhuluma njengomklami udinga ukudala imibono ekhuthaza abantu. Futhi imininingwane mayelana nomphumela noma i-captivate.
Ukungasho ukuthi udinga ukuba uchwepheshe ku-Adobe Photoshop. Ukusho lutho lwezinhlelo ze-Illustrator, ukwakheka kwangaphakathi nangaphandle nezinye izinhlelo ezifanele. Futhi umqambi akakaze asebenze yedwa. Uzoba ukusekela amaqembu wokuthengisa izingcingo kumaphrojekthi ahlukahlukene ezokuxhum. Ngakolunye uhlangothi, izidingo ozidingayo. Ngokwazi njengabaphathi bezentengiso ozidingayo. Isiqu se-master in design graphic. In eMiddle East, bakhetha idiploma yasenyuvesi yasendaweni evela e-UAE.
Ngalesi sikhundla, ngaphezu kwalokho, udinga isipiliyoni sokuklanywa okubonakalayo nge-design yezokuxhumana eyisisekelo. Okubaluleke ngokufanayo kuwe ukuba nolwazi lobuchwepheshe bokuklama isofthiwe ezifana nohlelo lwe-Photoshop no-InDesign ngaphezu kwalokho Illustrator, Sketch, nezinye eziningi.
imisebenzi yokumaketha e-Dubaia href="https://www.dubaicitycompany.com/tag/jobs-in-dubai-and-abu-dhabi/">jobs in Dubai and Abu Dhabi?
Marketing career in the Middle East. Although this may be true this career is the most projected employment. In contrast, amathuba kusukela Dubai iwine i-Expo 2020. Umsebenzi we-Emirates emkhakheni wokukhangisa ukhula minyaka yonke. Kusuka kuchwepheshe wokumaketha wedijithali kuze kufike kumqondisi omkhulu wentengiso. Konke kungenzeka lapho uvakashela Abu Dhabi ukuzingela umsebenzi. Omunye wamasayithi omsebenzi omuhle wokuthengisa umsebenzi ngu-Angel.co
Imisebenzi yokuthengisa kulula kakhulu ukuyithola. Ngale nhloso, ungathola umsebenzi cishe kunoma iyiphi inkampani. Ngoba ukumaketha akuyona kuphela ezinkampanini zezikhangiso. Yonke inhlangano enkulu inomnyango wayo wangaphakathi wokuthengisa. Ngakho-ke ungaba ne bheka izinkampani eMiddle East bese uqhubekela phambili bese ufaka izicelo zezikhala zomsebenzi ezitholakalayo. Umsebenzi wokumaketha ubandakanya ukuphathwa kwabezindaba kwezokuxhumana kanye nokuthengisa okuqondile kokuthengisa. Ukubeka ngenye indlela, uma unamakhono anele ungathola isikhala esihle.
Enye yezibonelo zabaqashi abakhokha kahle ebhizinisini lezentengiso yizinkampani ze-SEO. Lolu hlobo lwe Izinkampani ezitshala kakhulu eMiddle East. Elinye iphuzu elibalulekile lalemisebenzi ukwakhiwa kokuphromotha. Isibonelo, ungaphakanyiswa ezinyangeni ezimbalwa nje uma ugijima imikhankaso yokuthengisa ezingeni eliphakeme. Ngakolunye uhlangothi, ungaqala inkampani yakho ngokuzayo uma uthanda ukuba nayo.
Ngakho-ke ukumaketha kwe-Emirates Jobs isivumelwano esiphambili. Futhi, awudingi imfundo eningi. Konke okudingayo ukuba nayo yimibono yakho ehlakaniphile. Mane nje ngoba umqashi omusha uhlala elindele ukungena kwemali kanye ne-ROI. Ngokuvamile hhayi lokho okufundile esikoleni.
Umsebenzi we-doorman njengabantu abachazwa ngokufana. Mane nje uhlanganise ukusiza abanye futhi ubagcine bavikelekile. Ngasohlangothini olubi akunjalo ngemali engenayo. Kepha munye we imisebenzi eshesha kakhulu ongayifaka izinkanyezi ngeziqu eziphansi ungunogada. Ngakolunye uhlangothi eDubai, yisikhundla esihle kakhulu. The izinga lobugebengu e-UAE yi-0% ngakho-ke nje ukusekela kulokho kuphephile ukwenza umsebenzi.
Engqondweni, yiqiniso, ungaphatha izinhlobo eziningi kakhulu zemisebenzi yokuqapha. Kepha eDubai City, kukhona abaphathi bamabhizinisi abacebile abaqashayo. Ngakho-ke ukuthola umsebenzi wokuphepha wangasese kunengqondo. Ukusiza abanye ukugcina ukugcina uma lokho uthanda ukukwenza. Faka isicelo sezokuphepha izikhundla ezikhona endaweni yomsebenzi. Kepha udinga ukukugcina lokho ukuthi eminye imisebenzi iya nezingane esikoleni. Ukuhamba nokulinda lapho umqashi wakho ethenga. Ukuchitha amahora amaningi emotweni noma iveni ulinde ize.
Kepha ngakolunye uhlangothi, ezokuphepha zangasese zinobuhle bazo. Isigaba sebhizinisi sihamba, ezemidlalo kanye nohlobo lwezimoto ezifana neBMWi7 neMercedes SLR. Futhi okuningi unesifiso esikhulu ukufeza ukuthi uzobamba iqhaza. Isibonelo, uma abaqashi bakho behambela eCyprus uzondiza naye. Uzohambela izindawo ezimangalisayo zemisebenzi efana neNingizimu Afrika futhi wenze imali ngesikhathi esifanayo. Ngakho-ke kusemqoka kakhulu kuwe ukuthola ukungalungi kanye nezimo zalomsebenzi.
Indlela yokuthola imisebenzi yakamuva e-Dubai nase-Abu Dhabi?
Umsebenzi omkhulu kunazo zonke emhlabeni wonke wemisebenzi ye-Emirates. Indlela yokuthola imisebenzi yakamuva e-Dubai nase-Abu Dhabi. Impendulo ayilula !. Zonke izinsuku umzingeli omusha ocwaninga nge-google wezikhala ezivuselelwe. Akusuwe wedwa ocwaninga nsuku zonke. Imithombo yezokuxhumana noma iwebhusayithi ye-inthanethi yokusebenzela umsebenzi. Enye yamasu amahle kakhulu yalokho isetha izaziso zezikhala zomsebenzi kusiza semisebenzi. Lapho kuvela isikhala esisha esizotholakala. Uzothola leso saziso ku-imeyili yakho yemisebenzi emisha ye-Emirates. Ngakho-ke qhubeka futhi uthole ama-portals omsebenzi. Ngubani ongakwazi sikusize ukusetha izexwayiso zomsebenzi futhi uqiniseke ukuthi ukhethe okuyikho.
Imisebenzi yakamuva e-Dubai ikhona i-2018 ngakho-ke kunesiqalo sonyaka. Kusasele nesikhathi sokwenza futhi uthole Imisebenzi Emirates. Okuhle kakhulu ku- Umsebenzi omusha yiwebhusayithi ye-portal website. Futhi, ukwahlukaniswa okuhlukanisiwe kuyasiza kakhulu ekuzingeleni umsebenzi. Izinkampani ezincane azinawo isabelomali okufanele zizisebenzise kumkhangiso obizayo. Ngakho-ke bathumela imisebenzi yokunikezwa kwiwebhusayithi yezikhangisi zendawo.
Ukuze uthole imisebenzi yakamuva oyidingayo ukuphatha izikhangiso zakho zendawo. Thola futhi amawebhusayithi afanayo ku-Google ngemishwana efana nale Imisebenzi e-Dubai 2020. Futhi ubheke i-Dubai Jobs kumathuba wakamuva we-2018. Zama ukuba ngobuchule ngisho nangokwedlula abanye abafuna umsebenzi futhi ubheke ku-Linkedin naku-Facebook. Kunenkampani enkulu enkulu yezidingo zokuqashwa kwasendaweni e-Abdu Dhabi. Futhi konke lokho kuthunyelwa imisebenzi inikeza nge-2020 kwabafuna imisebenzi yendawo.
Imisebenzi ye-Accountant Dubai nezinkampani ezihola phambili
Imakethe yezezimali e-UAE isakhula i-Expo 2020. Isilinganiso esikhulu sokuthuthukiswa kusukela i-1999 ine-Dubai City ephathwayo. Ukuze uthole lolu hlobo lomsebenzi ungaqala njengomgcini-mlando omncane. Eqinisweni, kunemisebenzi embalwa ebalulekile okudingeka uyilandele. Ngalokhu engqondweni, ungaqala ukusebenza for corporation enkulu. Ngamanye amazwi, qala ukusebenza ku-Abu Dhabi ngaphansi kokuqondiswa komphathi omkhulu wezezimali. Ngenxa yalesi sizathu, uzokwazi ukuthola ihhovisi eliphethe iphrojekthi yakho.
Ngaphezu kwalokho, umphathi we-akhawunti uzodinga ukuxhumanisa iphothifoliyo yokutshala imali eningi yamakhasimende. Ngokubambisana nesikweletu sokuhlinzeka iklayenti. Ngamunye we ukutshalwa kwezimali kudinga ukulungiswa ezingeni eliphezulu. Akuwona umsebenzi kuphela ozobe ulungiselela ama-invoice kodwa futhi ulandele izinkokhelo. Futhi imakethe yebhizinisi laseMpumalanga Ephakathi, kuningi lokuthengiselana kwezezimali. Ungasho ukuthi uzodinga ukugunyazwa okugcwele. Ngokuvamile kusuka kumphathi wehhovisi okwamanje ophethe. Ngakolunye uhlangothi, ukusebenza ngaphambi kokufaka izindleko kuphakama.
Ngokuvamile, bonke bayazi i-Abu Dhabi Commercial Bank. Futhi, iBarclays Bank Plc iyinkampani ekalwe kakhulu ukusebenzela eYurophu. Ngaphezu kwalokho i-Dubai Islamic Bank ene-Emirates Bank International enye izinkampani ze-2 ezifanele ukubhekwa. Futhi ekugcineni iBhange Lezwe lase-Abu Dhabi kanye neBhange Lezwe laseDubai. Zonke ziyizindawo ezinhle zokuqala umsebenzi wakho wamaphupho.
Umsebenzi wezezimali kuwumsebenzi onzima ukuwenza!
Vele alupheli usuku emisebenzini yokubalwa kwezinsuku. Ngalesi sizathu, ukwenza noma yimuphi omunye umsebenzi onzima kanye nemisebenzi engabelwa. Ngezikhathi ezithile ngaphansi kwalezo zimo ezisebenza ngaphezulu kwe-12h ngosuku. Ukusiza umphathi wezimali kanye nabaphathi bamahhovisi ukuqhuba iminyango yezimali. Ngenxa yalokho kukhiqiza imibiko eminingi ukunikeza imibiko emisha. Ngokwalesi sizathu, bheka izinkampani ezimbalwa okufanele uqale ukusebenza ngazo emkhakheni wezezimali.
Ukubeka enye indlela kubaluleke kakhulu ekusunguleni uhlelo lokugcwalisa okufanele. Ngokwengeziwe ukusebenza ngama-invoice amaklayenti kanye nama-invoice abahlinzeki. Ihlola izikweletu ezincane zemali, amabhange ngokuhlukile kwebhizinisi. Ngokuqhathaniswa nokusebenza ngezinkokhelo zasebhange, amakhadi wesikweletu amaningi amathuba amaningi ebhizinisi e-2020. Ngokulungiselela okufanayo kwendlela yokugeleza kwemali yanyanga zonke. Yize lokhu kungaba yiqiniso eminye imibiko yezezimali nayo idinga ukwenziwa. Ngesikhathi esifanayo ukuxhumana nehlangano. Futhi uMqondisi Wezimali kanye Nomphathi Wemigqa kuzo zonke izindaba ezifanele. The Ngokuqinisekile imisebenzi ye-Emirates akufanele kube lula ukukuthola kepha kufanele kube nzima ukukuthola.
Yimuphi uhlobo lwemisebenzi e-intanethi e-Dubai nase-Abu Dhabi ayatholakala?
Umsebenzi we-Emirates ungathola emabhokisini emisebenzi e-intanethi. I-Dubai idolobha elihlinzeka ngezikhala ze-25,000 ku-intanethi ngenyanga ngayinye. Ngakho noma yini ongathanda ukuyibuka ngokuqinisekile ungayithola. Imisebenzi e-inthanethi ihlukile kusukela ekubekeni komsebenzi okujwayelekile. Ukucacisa ku-Abu Dhabi kukhona okwamanje ukufuna iMenenja ye-Online Store esheshayo ukujoyina ithimba labo.
Ukubeka ngenye indlela, abagqugquzeli be-intanethi abathola ukunikezwa kwemisebenzi. Ngenxa yalesi sizathu, qiniseka ukuthi ama-KPIs ahlangana ngaso sonke isikhathi ngemisebenzi yokumaketha kwe-inthanethi. Into yokuqala okumele ikukhumbule kuzosebenza ngokusebenzisana namaqembu eCommerce yokukhangisa e-Abu Dhabi. Ohlangothini olubi ukuthuthukisa umsebenzi we-intanethi nokuphatha nokuthuthukisa izitolo ze-intanethi. Kubalulekile emisebenzini ye-intanethi ku-Abu Dhabi. Ngaphansi kwalezi zimo, ukusekela kwe-IT kubaluleke kakhulu. Uma kunjalo, ithimba lokuthengisa lizosebenza eduze nawe.
Ukucacisa ngokuqondene ne- funa ngaphakathi kwemisebenzi ye-Emirates zihlala zivulekile. Ungathola amathuba ezikhala online ezitolo ze-Intanethi, izinkampani ze-SEO, ukubonisana ngebhizinisi eliku-inthanethi ngaphezu kwalokho ungaba uchwepheshe we-IT online. Ngendlela efanayo umsebenzi online ukukunikeza umvuzo ngokuzikhandla kwakho nempumelelo eDubai nase-Abu Dhabi.
Ngasikhathi sinye, ungalindela ibhonasi enhle kakhulu ngomholo wokuncintisana onemihlomulo yomshuwalense wezempilo. Noma uzwa sengathi imisebenzi ye-Emirates ingeyakho. Akunandaba noma yini edingekayo ukuze ube yingxenye yenkampani ephumelele online. Eqinisweni ngicela ufake izicelo zezikhala eziningana nge-CV ebukeziwe ngomsebenzi e-UAE.
Ungasesha kanjani futhi ukhethe imisebenzi yokufaka idatha ku-Dubai?
Ukusesha nokukhetha imisebenzi yokufaka imisebenzi yokusebenzela. Akulula yini lokho, okunye ukucwaninga okubonisa ukuthi kubambisana nezinhlangano zomsebenzi. Ngokuqinisekile, sikusiza umhlaba ukuthola umsebenzi wokungena kwedatha ku-UAE. Ukuphinda ngokuphathelene nalokho hlobo lwezithuba. Sibona ukuthuthukiswa kwebhizinisi kakhulu ezinkampanini zase-UAE. U-Abu Dhabi, ngakolunye uhlangothi, ubheka ngokuba owesifazane onolwazi onolwazi onokuthutha. Okungcono kunazo zonke, kunomsebenzi wokufaka idatha futhi usuvele usebenza njengomhleli ku-UAE.
Ukubeka ngenye indlela, qinisekisa imininingwane yokunemba lapho uthayipha iphuzu eliyisihluthulelo. Ngemisebenzi ye-Emirates, udinga ukuhlunga imininingwane ngokuya ngezinto eziza kuqala kuhulumeni. Lokho ukusho ukuthi, ukulungiselela idatha yomthombo yokungenela ikhompyutha kuyinto esemqoka. Le misebenzi idinga ukufaka isicelo samasu wezinhlelo zedatha futhi izinqubo zamaphrojekthi amasha e-United Arab Emirates.
Iphuzu elivame ukunganakwa likhiqiza imibiko yangaphakathi. Kuningi okuhilelekile kulokhu. Ngasohlangothini olubi ezindaweni ezikhethiwe futhi wenze imisebenzi yokusekelayo ngemuva kwamahora ngalo msebenzi uyadingeka. Ukuphela kwendawo ongathola kuyo umsebenzi wokungenela idatha ukwazi abantu ubambe iqhaza kuphrojekthi. Ukwenza isibonelo, abamele uhulumeni eHhovisi. Noma ngisho nezinhlangano ezizimele ezithile ezisebenzela amanye amaphrojekthi wedatha.
Ukuthola imisebenzi yobuhlengikazi e Dubai nase-Abu Dhabi
Umsebenzi wezokwelapha ngokwesibonelo ku-UAE udinga ama-degree ngokuqinisekile. Ukukhomba ukufuna umsebenzi e-UAE. Njengoba umhlengikazi umqondo omuhle e Dubai. Yiqiniso, uma unolwazi. Abahlengikazi abaningi abahlengikazi kanye nemisebenzi yezokwelapha-yokuhlinzwa kunzima. Kuze kube manje, ungakwazi ukusingatha isikhundla esibhedlela sase-Dubai.
Ngaphandle kokulibala Umsebenzi wokuba ngumhlengikazi oqeqeshiwe oqeqeshiwe. Kutholakala ngisho nakubantu abavela kwamanye amazwe. Le misebenzi efaka ukuphathela abanye. Ngalesi sikhathi unesi unikeza ukunakekelwa kweziguli ngqo Dubai izibhedlela. Ngaphambili, le misebenzi enzima iqondisa ukubandakanyeka okuningi. Isikhungo semisebenzi ehlobene nokunakekelwa kweziguli kusetshenziswa inqubo yesayensi yokwamukela izihambi yama-Arabhu nezinsizakalo zokunakekela abahlengikazi.
Lapha nalaphaya ukunakekelwa kwabahlengikazi kunikezwa izingane. Emuva, inani labantu abadala nabezokuma kwezwe. Imisebenzi ye-Emirates njengomhlengikazi olawula ukuqonda ukuqonda izibopho zeziguli ezintsha ezizisingatha. Kungekudala ukusebenza ezindaweni zokwelashwa ngaphakathi kokuhlangenwe nakho kwasesibhedlela lapho kudingeka.
Imisebenzi ephuthumayo e-Dubayi yabathuthukisi
Wonke umuntu ofuna umsebenzi ovela e-expat ufuna umsebenzi e-Middle East. Izindleko ze ehlala e Dubai mkhulu, ukhokhela irenti, izikweletu zikagesi nokunye okuningi. Lokho konke kuza embuzweni owodwa. Indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai njenge-expat fast okwanele ?. Konke kungazelelwe kodwa kukhona impendulo eyodwa kuphela. Kuthumela isicelo sakho somsebenzi wonke indawo kanye ne-imeyili ongayithola.
Abanye abaxoshwa e-UAE banokuhlangenwe nakho okuthile ekutholeni umsebenzi. Akufanele wesabe ukucela izeluleko. Umsebenzi ophuthumayo ongawuthola eDubai yiKitchen porter. Lolu hlobo lwe Umsebenzi ngalesi sikhathi samanje iseyinto okunzima kakhulu ukuyiphathae. Imisebenzi yomzimba nemisebenzi yezandla kulula kakhulu ukuyithola. Sesha imisebenzi eyisisekelo ezikhangisweni zasendaweni bese ufonela abaqashi. Kufanele uthole umsebenzi edolobheni lamaphupho ngokushesha okukhulu. Akukona nje lokho obewukufuna kepha ungahlala ukuguqula. Ngakho-ke ungakhathazeki ngokweqile. Futhi zama nje ukuqala umsebenzi e-Dubai kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izindleko ezizohileleka kulokhu.
Ok, on the other hand, we need to add Emirates Group Careers to the list. Ukusebenza ne-Emirates Group, in the long run, is a key point of you would like to secure your future. For UAE National and Izinsizakalo zokuqasha emhlabeni jikelele. Abaphathi be-Emirates abaqasha bazinikele kakhulu ekuqesheni abantu bokufika kusuka emazweni ase-Asia nase-GCC. Okokuqala, ukutshalwa kwezimali okukhulu okuzosiza i-Emirates ukuthi ikhulele imisebenzi ye-Expo e2020.
Ngemuva ibhizinisi lezindiza yindawo yemisebenzi emisha ye-Emirates. Abaphathi bokuqasha bahlala bekhuthaza abasebenzi ngasese ngokuthembekile ngokubambisana. Amaqembu aphikisayo ezinkampanini zikahulumeni ezingekho ngaphansi kukahulumeni. Nakanjani ukusebenzela ukuzibophezela nentuthuko. Kulolu hlangothi babheka kuwebhusayithi yabo yomsebenzi bese usebenza nge-Resume yakho evuselelwe.
Imihlahlandlela kanye Namaqembu Emisebenzi Efanele
Ngaphambi kokuhamba, udinga ukubheka indatshana yaseMiddle East evela kubalandeli bethu. Ungakuthola kalula umsebenzi e-UAE. Sakha amaqembu emisebenzi amangalisayo abafuna umsebenzi. Isibonelo, ungangeza i-CV yakho kweyakho iphupho idolobha eGulf. Xhuma nabanye abafuna umsebenzi abafuna umsebenzi. Bese usho abaphathi abasha bokuqasha nge-CV yakho ebuyekeziwe.
Eminyakeni elandelayo imakethe ishukumisele kakhulu ukuqashwa komakhalekhukhwini ungasebenzisa i-android yakho ukuthola umsebenzi.
Emirates Imisebenzi kanye nokusesha umsebenzi e-UAE!
Manje sisebenzela imisebenzi yase-Emirates e-Dubai nase-Abu Dhabi
Thola UJob e Dubai? ngokumangazayo ungathola lowo msebenzi wokuphupha. Vele ulayishe kabusha futhi uqale Emirates Career entsha ku Dubai!